ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 13.2 နတ်ကတော်တွေ
နတ်ပွဲထဲက နတ်ကတော်တွေ အကြောင်း ဆက်ကြဦးစို့..။
နတ်ကတော် တော်တော်များများဟာ.. ယောက်ျားတွေပဲ..။ အခြောက်တွေပေါ့..။ တချို့မိန်းမ နတ်ကတော်တွေလဲ ရှိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်.. အရည်အတွက်က ခပ်နည်းနည်းပါပဲ..။ ရွာနတ်ပွဲကို လာတဲ့ နတ်ကတော်တွေကတော့.. ယောက်ျားနတ်ကတော် အခြောက်တွေ ချည်းပါပဲ..။
နေ့ခင်းဖက်မှာ.. သူတို့နတ်က ကြတယ်..။ မနက်ကုိုးနာရီခွဲလောက်ကနေ.. ညနေ သုံးနာရီခွဲလောက်အထိ.. ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ.. က ကြတယ်..။ မြန်မာဆိုင်းဝိုင်းနဲ့.. ဒစ်စကို သီချင်းကအစ.. ဆိုကြတယ်..။
"ကိုကို ရေ.. ကွယ်ရာမှာ ခြေမများနဲ့နော်.. ကိုကိုရေ.. " ဆိုတာလဲ ပါတယ်..။
" ရင်မှာခံစား.. သူမမြင်နိုင်ပေ.. အတွင်းကြေ.. အတွင်းကြေ.. " ဆိုတာလဲ ပါတယ်..။
"နတ်ပွဲလာတဲ့ သူဌေးကတော်... ပိုက်ဆံများများ ယူခဲ့နော်.. " လို့လည်း.. မားကတ်ကင်း ဆင်းလေ့ရှိတယ်..။ တူနောင်း ဂျိမ်းဂျိမ်း ဂျိမ်းဂျိမ်းဆိုတဲ့.. နတ်ဒိုးသံတော့.. မကြားချင်မှ အဆုံးပေါ့..။
ဆိုင်းသံ သီချင်းသံ.. ချွေးနံ့ .. အမွှေးနံ့သာပေါင်းစုံနံ့တွေ နဲ့နတ်ကွန်းတစ်ခုလုံးမှာတော့.. လူတွေက ပြည့်ညှပ်ကျပ် နေတာပါပဲ..။ နတ်ကတော်က သီချင်းဆိုလိုက် ကလိုက်နဲ့.. ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့.. ပုရိတ်သတ်ထဲ.. ခွက်ထိုးခံတယ်..။ အသီးသီး အသသ.. အကြောက်တရားရှိသလောက် သဒ္ဓါသလောက်.. အမျှော်ရှိသလောက် ထည့်ကြတယ်..။
ခွက်ထဲက ငွေတစ်ချို့ကို.. မမနှဲ နတ်ရုပ်ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့.. နန်းထိုင်ဆီ နတ်ကတော်က ကရင်း လှမ်းပေးတယ်..။ နန်းထိုင်က.. နတ်ရုပ်ရဲ့ အချွန်အတက်တွေကြားထဲ.. ပိုက်ဆံတွေ လိုက်ညှပ်တယ် ( ညနေကျမှ.. အဲဒီပိုက်ဆံတွေ သိမ်းတယ်.. )
ဆိုင်းဆရာက သူလည်း.. ရှိသေးတယ်ဆိုတာ.. နတ်ကတော် သိအောင် နတ်ဒိုးနဲ့ အချက်ပြတယ်..။ ပိုက်ဆံတစ်ဆုပ်နှိုက်ပြီး နတ်ကတော်က.. ဆိုင်းဝိုင်းထဲ ပစ်ချပေးတယ်..။ တိုးဝှေ့ကြည့်နေတဲ့.. ပုရိတ်သတ်ကို.. တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် အာဏာပြ ထိန်းသိမ်းနေတဲ့.. ရဲသားကိုလည်း.. တစ်ရာလောက် နတ်ကတော်က ပေးလိုက်တယ်..။ ခွက်ကျန်ကိုတော့.. သူ့ပီအေ ဆီ ပေးလိုက်ပြီး ကွေးနေအောင် သူ ဆက်ကတယ်..။
"တူနောင်ဂျိမ်းဂျိမ်း ဂျိမ်းဂျိမ်း.. နတ်ပွဲလာတဲ့ သူဌေးကတော် ပိုက်ဆံများများ ယူခဲ့နော်.. တူနောင်ဂျိမ်းဂျိမ်း ဂျိမ်းဂျိမ်း..."
ချွေးသံရွှဲရွှဲနဲ့.. မီးကုန်ယမ်းကုန် ကတာတွေကို ညနေပိုင်းရောက်တာနဲ့ တစ်ခန်းရပ်တယ်..။ နောက်တော့.. ရေမိုးချိုး ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီး ပွဲခင်းလျှောက်ကြတယ်..။
တစ်ချို့အခြောက်တွေ တော်တော်ချောကြတယ်..။ မိန်းမချော ချောကြတာပဲ..။ ၀တ်ထားတာကလဲ.. မိန်းမရှုံးလောက်တယ်..။ တစ်ချို့ဆို.. ဇာပေါက်.. အင်္ကျီလိုဟာ ၀တ်ထားတော့ မမြင် သင့်တာတွေ မြင်နေရတယ်..။ ဆေးတွေ ဘာတွေနဲ့ လဲ စီမံထားဟန်တူပါရဲ့..။ အရွယ်ရောက်ပြီး အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုထက် သူတို့မလျော့ကြဘူး..။ အင်္ကျီ အောက်မှာ လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်နဲ့ပေါ့..။ အဲဒါကို.. သူတို့က ဂုဏ်ယူဟန်တူပါတယ်..။ ဖင်လေး ယမ်းတန်းယမ်းတန်းနဲ့ ပွဲခင်းတစ်လျှောက် လူးလာခေါက်တုံ လုပ်နေကြတယ်..။
သူတို့မှာလည်း.. သူတို့ဖောက်သည်နဲ့သူတို့ပဲ..။ လက်ဖျားငွေသီးနေတဲ့သူတွေ ဆိုတော့.. ငွေလိုသူ ရွာသားတွေ ၀ိုင်းနေတာပေါ့..။ တစ်ချို့ အခြောက်အိပ်တဲ့ နတ်ကွန်းထဲက ခြင်ထောင်ဘေးမှာ.. ရွာသားတွေ တုံကင်ယူပြီး တန်းစီစောင့်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတောင် ရှိတတ်တယ်..။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့..။
ကျွန်တော့်မှာ.. အဲဒီလိုမျိုး.. ယောက်ျားချင်း အချစ်ရှာတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိတယ်..။ သူ့နာမည်က ကျော်ဆွေလို့ ခေါ်တယ်..။ တုံကင်ယူ တန်းစီစောင့်ရတဲ့ အကြောင်း.. သူပြောပြလို့.. သိရတာပါဗျာ.. ဟဲဟဲဟဲ..။ ( ပြောမယုံကြုံဖူးမှ သိ လို့ တော့ မပြောရဲဘူးဗျို့ )
လက်ထဲ ငွေနှစ်ကျပ်လောက်ရှိရင် ရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ ရတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့.. သူတို့ဆီက.. ငွေငါးကျပ်လောက်ရရင်.. ထင်ရာလုပ်လို့ ရသွားနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့.. မားကတ်က.. ပိုတင်ရှယ် ရှိနေတော့တာပေါ့..။ အဲဒီအချိန်တုံးက.. အေအိုင်ဒီအက်စ်ဆိုတာ.. ကြားတောင် မကြားဖူး ကြသေးဘူး..။
ကြုံလို့.. အခြောက်တစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော့်အကြောင်း ပြောရဦးမယ်.. ။ ဟီးဟီး
အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ.. စာသင်ပေးတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာမ တစ်ယောက်ရှိတယ်.။ ဆရာမတို့က.. အထည်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်..။ ပုံမှန်ကတော့.. ရွာဈေးမှာ.. ရောင်းတာပဲ..။ နတ်ပွဲချိန်မှာတော့.. ပွဲခင်းထဲထွက်ပြီးရောင်းတယ်..။ ကျွန်တော်က.. သူတို့ဆိုင်ကို.. ညစောင့်အိပ်ပေးရတယ်..။ သူတို့ဆိုင်က.. နတ်ကွန်းနဲ့ နီးတယ်..။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်း စတာပဲ..။
ဆရာမတို့ဆိုင်နဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာ.. မြို့ကလာဖွင့်တဲ့.. အလှပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်..။ အဲဒီဆိုင်က ကောင်မလေးတွေ က.. ချစ်စရာလေးတွေ..။ သူတို့ကို ငမ်းချင်တာနဲ့ ညနေညနေဆို.. ကျွန်တော်လည်း.. ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ တီရှပ်နဲ့ ပဲများနေခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့်.. ခုတ်ရာတခြား ရှရာတခြားဖြစ်တော့တာပဲ..။ အလှပြင်ဆိုင်က ကောင်မလေးတွေက.. မကြွေဘဲ.. မေဘယ်ထွန်းထွန်းလို့ ခေါ်တဲ့ အခြောက်တစ်ယောက်က.. ကျွန်တော့်ကို အရမ်းခိုက်သွားခဲ့တယ်..။
ညဆယ့်တစ်နာရီလောက်ဆို.. ကျွန်တော်အိပ်တယ်..။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ.. ၀င်းနိုင်ဦးလို့ ခေါ်တဲ့.. သူငယ်ချင်းလည်း..လာအိပ်တယ်..။ အအိပ်ဆတ်ချက်ကတော့.. မေဘယ်ထွန်းထွန်း ဆိုင်ပေါ်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို ဟိုကိုင်ဒီကိုင် လုပ်တာတောင်.. ချက်ချင်းမနှိုးဘူး..။ အခြောက်မို့လို့ပေါ့.. သူခိုးဆိုရင်.. ဆရာမတော့.. ဒေ၀ါလီ ခံရပြီပဲ..။
ကျွန်တော်ရုတ်တရက် လန့်နိုးလာတဲ့ အထိ.. အဲဒီအခြောက်က.. လက်မလျော့ချင်ဘူး..။ ခနလေး ခနလေး.. ငါးမိနစ်လောက်ပဲ လို့.. ဇွတ်ပြောနေသေးတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း.. ထူပူပြီး. သူ့ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးပစ်လိုက်တယ်..။ သခင်မ နဲ့ တိုင်ပြောမယ်လို့.. ပြောပြီး ပေစောင်းပေစောင်းနဲ့.. သူပြန်ထွက်သွားတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်တာကို ကြားတဲ့.. ဘေးဆိုင်တွေ နိုးလာပြီး စပ်စုကြတယ်..။ အလှပြင်ဆိုင်ထဲက.. မချောတွေကလည်း.. ပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ပေါ့..။ အိပ်ချင်နေတဲ့ စိတ် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိအောင်.. ကျွန်တော် ရှက်နေခဲ့တယ်..။ ၀င်းနိုင်ဦးကတော့.. ပြုံးစိစိ လုပ်နေတယ်..။
အဲဒီအခြောက် အမှတ်သည်းခြေမရှိဘူး..။ နောက်ရက်တွေမှာလဲ.. ဆိုင်နားမှာ ရစ်သီရစ်သီ လုပ်နေတုံးပဲ..။
သူက ရစ်သီရစ်သီလုပ်နေတော့.. ကျွန်တော့်မှာ.. ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဲတော့ဘူး..။ နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်နေခဲ့တယ်..။ မကြာခန လန့်လန့်နိုးတယ်..။ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ထဲကို.. မကြာခန သူအလည်လာတယ်..။ အဟတ်ဟတ်..။
၀င်းနိုင်ဦးကတော့.. ဒီအခြောက်ကို.. နည်းနည်းတော့ ပညာပေးရအုံးမယ် ဆိုပြီး.. တစ်ည သူ့ကို ပခုံးဖက်ပြီး ထွက်သွားတယ်..။ နောက်တစ်နေ့မှာ.. ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဆိုင်မှာရှိနေချိန်.. ပေစောင်းပေစောင်းနဲ့.. အဲဒီအခြောက် ရောက်လာတယ်..။
ရှင့် သူငယ်ချင်း ဒီည မလာဘူးလား လို့.. ရောက်ရောက်ခြင်း.. မေးတယ်..။ လာမှာပေါ့.. စောသေးလို့ လို့.. ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့.. ရှင့် သူငယ်ချင်းက ကာစတန် ကလားလို့.. သူဆက်မေးတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့. စကားပြောချင်စိတ် မရှိတာနဲ့.. အင်းမလုပ်အဲမလုပ် လုပ်နေခဲ့တယ်..။
" မနေ့ညက..ကျမ က သူ့ကို ဘာမှ မတောင်းဆိုပါဘူး."
"သူ့ဆန္ဒကို တောင် လိုအပ်ရင် ကျမက ဖြည့်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ.."
"ဒါပေမယ့် သူက ကျမ အိပ်ထောင်ထဲက ပိုက်ဆံခုနှစ်ကျပ်နဲ့ မီးခြစ်တစ်လုံး အတင်းနှိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ် .."
"ရပါတယ်လေ.. သူ့တန်ဘိုးသူ ဖြတ်သွားတာပဲ.. "
"ကျမက ခွင့်လွှတ်ပေမယ့်.. သခင်မက တော့ ခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး.. "
... ကရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ် ပြောပြီး ချာကနဲ သူ လှည့်ထွက်သွား ခဲ့တယ်...။
အခြောက်ရင်မှာ.. ဒဏ်ရာတွေနဲ့လားတော့.. ကျွန်တော်မဝေခွဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး..။
ကြုံလို့ အဖေနဲ့ အတူ နတ်မေးတဲ့ အကြောင်း ပြောရဦးမယ်..။ နန်းထိုင်လုပ်တဲ့ ကိုဖိုးအေး က.. အဖေ့မိတ်ဆွေ..။ တစ်ည.. အဖေ့ကို အပျင်းပြေ နတ်မေးရအောင်ဆိုပြီး သူက လာခေါ်တယ်..။ အဖေနဲ့ ကျွန်တော်ပါ နတ်ကွန်းထဲ လိုက်သွားခဲ့တယ်..။
ဟိုရောက်တော့.. ကိုဖိုးအေးတို့မိသားစုရယ် ကျွန်တော်တို့ သားအဖရယ် နတ်ကတော်ရှေ့မှာ ထိုင်ကြရတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိရှေ့မှာတင် နတ်ကတော်တကိုယ်လုံး အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းလောက်အောင် တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်သွားတယ်..။ အဲဒီလို ဖြစ်တာဟာ.. နတ်ဝင်တာပဲ လို့.. နောက်မှ သဘောပေါက်တယ်..။
နတ်က ဘယ်နေရာက ၀င်သွားမှန်းတော့ မသိပါဘူး..။ အ၀င်တော့ နည်းနည်းကြမ်းတယ် ပြောရမှာပဲ..။ ခနနေတော့.. နတ်ကတော်က.. သံသေးသံကြောင်နဲ့.. ငါ့ကို.. ချိုချင်ဆက်စမ်း ဘဲဥဆက်စမ်းနဲ့ ပြောတယ်..။ အဲဒီအခါမှ.. ၀င်သွားတဲ့ နတ်က.. မနှဲလေးမှန်း သိကြရတယ်..။
နတ်ကတော် ပါးစပ်က.. ထွက်တဲ့.. လေယူလေသိမ်း စကားသံကို ကြည့်ပြီးမှ.. ဘယ်နတ်ဝင်တယ်ဆိုတာ.. သိကြရတယ်..။ ဥပမာ.. ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ တစ်တစ်ခွခွ ပြောရင် အမေဂျမ်း ၀င်တာပဲ..။ ကြက်ကြော်ဆက်စမ်း အရက် ဆက်စမ်း ဆိုရင်.. ကိုကြီးကျော်တဲ့..။ တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း နတ်ကတော်က.. တအေ့အေ့ နဲ့.. ကြို့ထိုး နေရင်း ဘိုးပြည့် ၀င်နေပြီတဲ့..။
ကြည့်ရတာ.. အားတဲ့နတ် အလှည့်နဲ့ ၀င်ရဟန်တူပါရဲ့..။
နတ်ဝင်သွားတာနဲ့.. မေးချင်ရာ မေးလို့ ရသွားပြီ..။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ၀ိုင်းမေးကြတယ်..။ နတ်ကတော်ကလည်း.. အသံသေးအသံကြောင်နဲ့ မေးသမျှ ပြန်ဖြေတယ်..။ အားလုံး ရယ်လိုက်မောလိုက်နဲ့ ဟာသလုပ်နေကြသလိုပါပဲ..။
ကိုဖိုးအေးက အဖေ့ကို မေးချင်ရာမေးလို့ ပြောတယ်..။ အဖေက.. နတ်ကို အယုံအကြည်မရှိသူဆိုတော့.. မမေးတော့ပါဘူး ဖိုးအေးရာလို့ ပြန်ပြောတယ်..။ ကိုလေးအုံး မမေးချင် ရင် ကျွန်တော်မေးပေးမယ်လို့ ကိုဖိုးအေးက ပြောပြီး အဖေ့ကိုယ်စား.. နတ်ကတော်ကို မေးပေးတယ်..။
ကိုဖိုးအေးက အဖေ့ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး..
"သူ့မိန်းမ အိမ်က ထွက်သွားတာ ကြာပြီ.. ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲ.. " လို့ မေးတယ်..။
"တော်တော်နဲ့ ပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး.. ခင်ဗျားကို ချစ်တော့ချစ်တယ်.. ဒါပေမယ့်.. အရမ်းကြောက်သွားပြီ.. လူကြီးစုံရာနဲ့ လိုက်ခေါ် မှ ပြန်လာလိမ့်မယ်.. " လို့ ပြန်ဖြေတယ်..။ ကျွန်တော်နဲ့ အဖေ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး နတ်တော့.. သောက်တလွဲဖြစ်ပြီလို့ တွေးပြီး ရယ်ကြတယ်..။
အမေက မန္တလေးကို သွားတာ..။ ကျွန်တော့်အကို တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်တက်တာကို.. လိုက်ပို့တာပဲ..။ ကိုဖိုးအေးမေးခွန်းက .. မရှင်းမရှင်းဆိုတော့.. နတ်ကတော်က.. ကျွန်တော့်အမေ စိတ်ဆိုးပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားတယ် ထင်သွားတာကိုး..။
နဂိုရ်ကမှ.. မယုံတဲ့ ကျွန်တော့်အဖေအတွက်တော့.. ပြောစရာတစ်ခု ထပ်ရသွားတာပေါ့..။ အဖေက မယုံဆို.. ငယ်ငယ်ကတည်းကလို့ ပြောရမှာပဲ..။
အရွယ်ကောင်း လူပျိုပေါက်အရွယ်မှာ.. အဖေနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်.. ပါးစောင်ထဲ ဇီးဖြူသီးငုံ သရင်းကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပြီး နတ်သွားမေးဖူးတယ်တဲ့..။ မနေ့က အကောင်းကြီး .. ဒီမနက်မှ ကောက်ခါငင်ခါ.. ပါးစောင်ကြီးယောင်ကိုင်းလာတယ်လို့ ... ပြောတော့.. ထုံးစံအတိုင်း နတ်ကတော်က.. နတ်ပူးပြီး.. ကိုကြီးလုပ်ထားတာ ( ကိုကြီးလုပ်ထားတာဆိုတာ..ကိုကြီးကျော်ပြုစားထားတာလို့ ဆိုလိုတာပဲ ) ပျောက်ချင်ရင်.. ကန်တော့ပွဲထိုးတောင်းပန်ရမယ် လို့.. လုပ်ချတော့တာပဲ..။
အဖေတို့က အဲဒီအချိန်တုံးက ကွန်မြူနစ်ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ဆိုတော့.. ပါးစောင်ထဲက ဇီးဖြူသီးထုတ်ပြ ပြီး ဘာကိုကြီးလုပ်ထားတာလဲ .. ခင်ဗျားတို့ နတ်ကတော်တွေ လူတွေကို လိမ်စားနေတာပဲ အားလုံးကို ဖမ်းတယ် ဆိုပြီး နတ်ကတော်တွေေ၇ာ.. နတ်ရုပ်တွေရော.. အားလုံး ကားပေါ်တင် စခန်းခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့.. အဖေ ပြန်ပြောပြဖူးတယ်..။
တကယ်တော့ နတ်ပွဲတွေဆိုတာ.. ကောင်းတဲ့ဖက်က ကြည့်ရင်.. ကောင်းကွက်တွေ တော့ ရှိပါတယ်..။ အနယ်နယ်က.. ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ.. ရောင်းကြ၀ယ်ကြ ဖလှယ်ကြပေါ့..။ ကုန်စည်တွေ စီးဆင်းတယ်..။ စီးပွားရေးအရ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြတယ်..။ မြန်မာလူမျိုးတွေ.. နတ်ပွဲကို အမှီပြုပြီး.. ခရီးသွားခွင့်ရတယ်..။ တချို့တချို့ဆို.. အပျော်ခရီးတစ်ခုလို သဘောထားကြတာပဲ..။